Goolhayaha Ay Liverpool Lasoo Saxeexanayso Maanta, Xiddiga Sida Rasmi Ah Uga Tegay & Dhawrka Laacib Ee Inta Ka Horreysa 5ta Galabnimo Ka Baxaya Anfield - Gool24.Net
Goolhayaha Ay Liverpool Lasoo Saxeexanayso Maanta, Xiddiga Sida Rasmi Ah Uga Tegay & Dhawrka Laacib Ee Inta Ka Horreysa 5ta Galabnimo Ka Baxaya Anfield
Suuqa sida dadban ee maxalliga ah ugu furnaa kooxaha Premier League ayaa maanta soo xidhmaya, waxaana jiraya saxeexyo ay kooxuhu lasoo saxeexanayaan ciyaartoyda heerka labaad ka dheesha iyo kuwo ay iyagu fasaxayaan.
Liverpool iyo Manchester United ayaa ugu horreeya kooxaha la hadal hayo inay ka tegayaan qaar ka mid ah ciyaartoygoodu, gaar ahaan laacibiinta da’da yar iyo kuwa boos la’aanta ka ah safka hore ee aan rajada buuran ka qabin inay helayaan xulashada macallimiintooda.
Kooxda kubadda cagta Liveproolayaa la sheegay in maanta uu heshiis rasmi ah kaga tegayo laacibka khadka dhexe ee Herbie Kane oo ku biiraya naadiga Barnsley ee heerka labaad ee Championship ka ciyaarta.
Sida uu qoray wargeyska Liverpool Echo, Herbie Kane ayaa heshiiskiisa la dhamaystiray habeenkii xalay, waxaana markii hore ay labada dhinac mabda’ ahaan isla qaateen inuu laacibkani ku baxo heshiis amaah ah, laakiin xilli dambe ay haddana wax is beddeleen.
21 jirkan oo kooxo kale oo Championship ka ka tirsan ay xiisaynayeen ayaa waxa la sheegay in Barnsley ay Liverpool u gudbisay dalab dhab ah oo heshiiskiisuna rasmi yahay, taas oo markiiba ay soo dhoweeyeen.
Kane ayaa kooxda koowaad ee Liverpool u saftay xili ciyaareedkii hore kulan ka tirsanaa Carabao Cup, ka hor intii aan amaah lagu siinin Hull City bishii January.
Kooxda Doncaster Rovers ee League One ayuu hore ugu soo ciyaaray xili ciyaareedkii 2018-19 oo uu iyagana amaah kula joogay, laakiin waxa uu hadda qayb ka noqonayaa Barnsley iyadoo uu kulankiisa koowaadna u ciyaari karayo Sabtida berri haddii maanta la dhamaystiro qandaraaskiisa.
Suuqa iibka ciyaartoyda Yurub oo xidhmay toddobaadkii hore, waxa Liverpool ay fursad u haysataa in ciyaartoydeeda qaarkood ay u dirto heerarka labaad ama ay iyagu kala soo saxeexdaan illaa inta ka horreysa 5ta galabnimo ee waqtiga UK ee maanta.
Reds ayaa lala xidhiidhinayaa goolhayaha Stoke City ee Jack Butland oo ay u doonayaan inuu sii buuxiyo booska uu ka dhaawacan yahay Alisson Becker oo uu Adrian ku fashilmay markii qaladaad badan uu sameeyey kulankii Aston Villa.
Dhawr ciyaartoy oo kale ayaa la sheegayaa inay maanta ka tegi karayaan Liverpool, waxaana xiddigaha la carrabaabayo ka mid ah Harry Wilson iyo Nat Phillips.